Guddiga joogtada ee golaha shacabka oo laba guddi u saaray cabashooyinka ka taagan canshuuraha iyo Ganacsatada | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Guddiga joogtada ee golaha shacabka oo laba guddi u saaray cabashooyinka ka...
Guddiga joogtada ee golaha shacabka oo laba guddi u saaray cabashooyinka ka taagan canshuuraha iyo Ganacsatada
Kulanka guddiga joogtada ee golaha shacabka waxaa guddoominayey guddoomiyaha golaha shacab Barlamaanka Federaalka Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari) guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha.
Diiradda waxaa lagu saaray kulanka xaaladaha ka taagan Ganacsiga iyo suuqyada caasimadda oo ka dhallatay habka nidaamka canshuur bixinta dowladda iyo ganacstada, xubnaha guddiga ayaana isla falan-qeeyey sidii looga wada qeyb-geli lahaa xal u helidda arrimahan.
Guddoomiyaha guddiga Ganasiga iyo Warshadaha ee golaha Shacabka Soomaaliya Xildhibaan Maxamed C/raxmaan ( Beena Beene) ayaa SNTV u sheegay in laba guddi loo saaray arrimaha Ganacsada, berrina ay kulan deg deg yeelan doonaan, si looga soo tala bixiyo.
Dhinaca kale Xog-hayaha guud ee golaha shacabka Barlamaanka Federaalka Soomaaliya C/kariim Xaaji Cabdi (Buux) ayaa sheegay in horraanta Bisha Maarso in uu furmi doono Kalfadhiga 3-aad ee golaha shacab.
Previous articleGuddiga doorashooyinka qaranka oo kulan la qaatey Shacabka Gobalka Banaadir
Next articleGuddoomiyaha Aqalka sare oo soo bandhigey buug lagu magacaabo heybso dhaqankaada